DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA CANON MP495 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ebe ọkwọ ụgbọala maka Canon MP495
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta bụ VKontakte, ndị nchịkwa ọ bụla dị na tebụl ọha mmadụ, kwesịrị zoo otu ma ọ bụ ọtụtụ ndị ndú nke obodo ha. Ọ bụ banyere otu esi eme nke a, anyị ga-akọwa n'isiokwu a.
Zoo ndị uwe ojii VKontakte
Taa, na-echebara mmelite niile nke ọrụ VK na nso nso a, ọ bụ naanị ụzọ abụọ dị mfe iji zoo ndị ndu obodo. N'agbanyeghi usoro a choputara iji nweta oru ahu, n'amaghi ihe omuma gi, n'ezie onye o bula enweghi ike imuta ihe ndi mmadu na-acho n'uwa, tinyere onye okike.
Ị nwere onwe ịhọrọ onye ịchọrọ ịzo. Ngwaọrụ maka ụdị nhịahụ a na-enye gị ohere ịmepụta ụdị nhọrọ niile na-enweghị ihe mgbochi.
Biko rịba ama na ntụziaka ọ bụla edepụtara n'okpuru dị mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ onye okike nke obodo VKontakte.
Usoro 1: jiri nghazi Kọntaktị
Ụzọ mbụ nke ịchekwa ndị isi obodo dị mfe dị ka o kwere mee ma na-emetụta ya na njirimara ọrụ kachasị. A na-eji usoro a eme ihe mgbe mgbe, karịsịa mgbe ọ na-emetụta ndị bịara ọhụrụ na netwọk mmekọrịta a.
Site na isi menu VK gaa na ngalaba "Otu dị iche iche", gaa tab "Management" ma mepee obodo ebe i nwere ikike kachasị elu.
A na-ewere ikike nke onye okike dịka ihe kachasị, ebe ndị nchịkwa nwere ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche maka ijikwa ma dezie ọha mmadụ.
N'akụkụ aka nri nke ebe obibi nke obodo, chọta nchịkọta ozi. "Ndi ana-akpo" ma pịa aha ya.
Na window nke meghere "Ndi ana-akpo" Ịchọrọ ịchọta njikwa na ịchọrọ ịzobe ma kpoo òké gị.
N'akụkụ aka nri nke aha na foto profaịlụ nke njikwa ahụ, pịa akara ngosi obe na ntinye aka. "Wepụ si ndepụta".
Mgbe nke ahụ gasịrị, njikọ onye ahụ ahọrọ ga-apụ kpamkpam site na listi ahụ. "Ndi ana-akpo" na-enweghị ike ịnweta mgbake.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi isi na mpaghara a, jiri bọtịnụ pụrụ iche "Tinye kọntaktị".
Biko mara na ọ bụrụ na ndepụta ahụ "Ndi ana-akpo" na nzobe na enweghi ndi ozo hapuru, ngwugwu a ga-apụ site na isi obodo nke obodo. N'ihi ya, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ozi kọntaktị maka onye ọhụrụ ma ọ bụ iji weghachite agadi, ị ga-achọ ịchọta ma jiri bọtịnụ pụrụ iche. "Tinye kọntaktị" na isi peeji nke otu.
Usoro a dị iche iche na ị nwere ike zoo ọ bụghị naanị ndị isi a họpụtara ahọpụta n'etiti ndị otu, kamakwa onye okike.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Usoro a dị nnọọ mfe, nke zuru okè maka ndị na-amalite ma ọ bụ ndị ọrụ na-adịghị achọ ịgbanwe isi ntọala nke obodo.
Usoro 2: jiri ntọala nke ọha na eze
Ụzọ nke abụọ ị ga-esi kọwaa ndị isi obodo na-enweghị isi dị mfe karịa nke mbụ. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ na ịkwesịrị idebe ọdịnaya nke isi akwụkwọ ahụ, ma, ozugbo, na mpaghara nke obodo.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanghachite omume gị, ịnwere ike ịmegharị usoro site na ntụziaka ahụ, ma na ntụgharị usoro.
Site na ebe obibi gị, chọta bọtịnụ n'okpuru isi ihe. "… " ma pịa ya.
Site na ndepụta ndị a, họrọ "Nchịkwa Obodo"imeghe isi ntọala ọha.
Site na igodo igodo nke di na aka nri nke mpio onu na ogugu "Ndị na-eso".
Ọzọ, na-eji otu menu ahụ, gaa na taabụ gbakwunyere "Ndị isi".
N'ime ndepụta, chọta onye ọrụ ịchọrọ ịzo, na n'okpuru aha ya, pịa "Dezie".
I nwekwara ike iji ọrụ ahụ "Mebie", n'ihi ya, onye ọrụ a ga - atụfu ikike ya wee laa n'iyi site na listi ndị ọrụ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'uche na na ngalaba ahụ "Ndi ana-akpo"N'okwu a, onye ọrụ ahụ ka ga-anọgide ruo mgbe i jiri aka ya wepụ ya site na ụzọ mbụ aha ya.
Na mpio nke meghere na ibe ahụ, chọta ihe ahụ "Gosi na ngọngọ kọntaktị" ma kpochie igbe ahụ.
Echefula ka ịpị bọtịnụ ahụ "Chekwa" iji tinye akara ọhụrụ na mmechi mmechi nke window window ntọala.
N'ihi omume niile e mere, njikwa a họpụtara ahọpụta ga-ezoro ruo mgbe ịchọrọ ịgbanwe ntọala kọntaktị. Anyị nwere olileanya na ị gaghị enwe nsogbu na usoro nke mmejuputa atumatu. Ihe kacha mma!